Ukubaluleka kwamava omsebenzisi kwi-brand | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ukubaluleka kwamava omsebenzisi kwi-brand
Ukubaluleka kwe amava omsebenzisi uphawu yinto siseko ukuba sifuna uphawu lwethu lunxibelelane ngokwenyani nabantu, ngaloo ndlela luyile Unxibelelwano olukhulu noluntu. Namhlanje kunokwenzeka ukuba ufumane amawaka eemveliso, kunye neenkampani ezibonelela phantse ngokufanayo phakathi kwabo, yiyo loo nto kubalulekile ukuba uchaze amava omsebenzisi afanelekileyo.
Iinkampani ezifana I-Coca-Cola ayizithengisi iziselo ezihlwahlwazayo kodwa ithengisa usapho, Abanye abanjengoAmena abazithengisi ii-mobiles kodwa bayazitshintsha, nabanye bathanda inkwenkwezi abazithengisi ikofu kodwa amava. Yenza imemori, isikhuthazo, umnqweno, amava apho umsebenzisi ayingomsebenzisi olula kodwa elinye ilungu losapho Kwintengiso. Ukugxila kumsebenzisi yeyona nto iphambili ukuba sifuna ukuba luphawu lokhuphiswano.
Ngamazwi ka-Ignacio Pastor kwi udliwano ndlebe yenziwa njengenxalenye ye-Master kusebenziso loyilo lokuNxibelelana kunye namava oMsebenzisi, i amava o amava omsebenzisi ijolise ekongezeni ixabiso leemvakalelo kwimveliso ukuze izuze ixabiso elingaphezulu kwemveliso ngokwayo.
"I amava ubalisa amabali ngenjongo yokulukuhla umsebenzisi ukuba athenge imveliso. " Umfundisi weIgnacio.
Ukulukuhla umsebenzisi ukuthenga imveliso usebenzisa uyilo njengesixhobo ukufezekisa oku. Ijolise kolu luvo, ezo zixabiso kunye neengcinga ziyafunwa ezigqitha kwinto ebonakalayo kwaye zifikelele kuloo nxalenye ingabonakaliyo kodwa ivakalelwa.
UAlvaro Garrido (INGES UC) uthetha kudliwanondlebe malunga amava Ukuqinisekisa ukuba la mava omsebenzisi enza ukuba imveliso ibe nomtsalane kwaye isebenze. Siyakuqonda ukubaluleka yenza olo nxibelelwano lweemvakalelo phakathi kwento nomntu ukuphucula imveliso.
Xa sithetha ngeemveliso kunye neemveliso sikwathetha ngazo iimvakalelo kunye neemvakalelo ukuba nganye idlulisele kuthi. I-Coca-Cola ayisosiselo nje esithambileyo kodwa kukumanyana, usapho, ukonwaba kunye nolunye uthotho lwamaxabiso ajikeleze uphawu. Singatsho ukuba ICoca-Cola yenye yeempawu ezisebenze kakhulu kumava omsebenzisi ukuzama ukwenza unxibelelwano phakathi kwegama kunye nabasebenzisi. Yenza umsebenzisi azive ukuba kunjalo Inxalenye yophawu Yinto esisiseko kwiCoca-Cola, umzekelo olungileyo yimeko yephulo layo apho iinkonkxa zeziselo zazo ezinxilisayo zazinamagama abantu abhalwe ngaphandle ngombono wokuba umsebenzisi uza kuthenga itoti ethile kuba inamagama ayo. .
Enye inkampani ebalaseleyo ekusebenziseni amava omsebenzisi kunjalo Starbucks, Le nkampani inyange amava njengendawo esisiseko kuyo yonke into yayo urhwebo. Kudliwanondlebe kunye Mlawuli we Marketing de Starbucks U-Beatriz Navarro uthetha ngendlela la mava egxile kumsebenzisi ibeyindawo ebalulekileyo yokuphumelela kwayo. Amava abo omsebenzisi ajolise kuwo Yenza abasebenzisi bakholelwe ukuba bayinxalenye yabo, Yenza uhlobo losapho olukhulu apho umsebenzisi enexabiso kwaye emanyelwa khona. Enye yeenkqubo abanazo ngale njongo yayikukubhala amagama abasebenzisi kwiiglasi zekofu ukuze babe neglasi yabo xa bethatha ikofu yabo. Kwelinye icala, bazenzele ubuntu babo apho umsebenzisi, nokuba yeyiphi na ivenkile abaya kuyo, uya kuba nayo imeko-bume enomoya ofanayo naphina emhlabeni.
Fumana tsala abasebenzisi Ayingomsebenzi olula, yiyo loo nto namhlanje iimveliso ezinkulu zifundisisa kakuhle indlela yokwandisa indawo yabo kunye nomsebenzisi ukuze banxibelelane ngcono kunye nabo kwaye bafezekise. ukudala usapho. Umsebenzisi ubaluleka, unelizwi kunye nevoti kuthungelwano lwentengiso yentsingiselo apho bathatha inxaxheba kukhuphiswano, babalisa amava abo kwaye banxibelelana ngqo nophawu. Abasasebenzisi, lusapho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Ukubaluleka kwamava omsebenzisi kwi-brand
Isizathu sokuba oopopayi banxibe abalinganiswa babo abathandekayo ngeiglavu kunye nezacholo zomqala